MinerGate: Ahoana ny fametrahana an'ity rindrambaiko mpitrandraka amin'ny GNU / Linux ity? | Avy amin'ny Linux
Amin'ny fotoana hafa dia nanoratra momba izany izahay Fitrandrahana nomerika ary nahaliana ny mpamaky izy ireo. Indraindray, ny lohahevitra noresahina dia momba Ahoana ny fanatsarana ny OS GNU / Linux ho an'ny fitrandrahana nomerika?, amin'ny fotoana hafa dia momba ny azo antoka izany GNU / Linux OS mety amin'ny Digital Mining na momba ny hevitra fototra mifandraika amin'ny faritry ny Fitrandrahana nomerika, Cryptocurrencies, Blockchain na FinTech.
Amin'ity fotoana ity dia hiresaka momba izany isika Rindrambaiko MinerGate ary ny fomba fametrahana azy amin'ny anay OS GNU / Linux. Nifidy izahay MinerGate, satria, amin'ny MS Windows Operating Systems, dia matetika ampiasaina amin'ny fahombiazany sy ny fahatsorany, ary ny fahamendrehana sy ny fahamendrehan'ny sehatra misy azy.
Alohan'ny hidiranao tanteraka amin'ilay lohahevitra dia tsara ny mitadidy fa raha te hahatakatra tsara kokoa ireo olana mifandraika amin'izany ianao Fitrandrahana nomerika, Cryptocurrencies, Blockchain na FinTech, misy ny sasany teo aloha sy mahaliana Lahatsoratra mifandraika ao anatin'ny bilaoginay, izay mety ho vakiana na vakiana indray, izay anisany ireto manaraka ireto:
1 Inona ny MinerGate?
2 Fametrahana MinerGate
2.3 Dingana 3
2.4 Fanamarihana farany
Inona ny MinerGate?
MinerGate amin'ny ankapobeny dia a Rindrambaiko momba ny harena ankibon'ny tany, fa io koa no anaran'ny Sehatra Digital Mining Digital nomen'ny fangatahana voalaza.
Araka ny tranonkala ofisialin'izy ireo, ny sehatra sy rindrambaiko dia faritana toy ny:
"MinerGate dia famatsiam-bola mitrandraka vola marobe noforonina tamin'ny taona 2014 nataon'ny vondrona mpankafy blockchain. Manome rindrambaiko fitrandrahana mora indrindra izahay, serivisy fanohanana 24/7 azo itokisana ary vondrom-piarahamonina manampy anao.".
"MinerGate xFast GUI Miner dia rindrambaiko mora ampiasaina sy avo lenta. Miorina amin'ny maritrano kaody vaovao, ny fampiharana dia mampiseho fivoarana hash mahavariana, mahomby kokoa amin'ny fiainanao ny fitrandrahana.".
naoty: Mba hanatanterahana an'ity fampianarana sy fametrahana ity dia hampiasa kinova kely namboarina sy namboarina izahay Distro MX Linux 19.X antso Fahagagana 2.0, izay efa namboarina tsara ho an'ireo asa ireo, raha ny fanazaran-teninay teo aloha voalaza momba izany. Ho fanampin'izay, tsara ny manamarika fa ny kinova ankehitriny an'ny MX Linux 19.X mifototra amin'ny Debian GNU / Linux 10 (Buster).
Ampidino ny lozisialy momba ny harena ankibon'ny tany
Noho izany dia tsy maintsy mankany amin'ny Fizarana fampidinana an'ny tranokala voalaza ary alao ny kinova ankehitriny misy GNU / Linux. Amin'ny fotoana anoratanao ity lahatsoratra ity dia efa mitady ny stable version 1.7, izay manolo ny fametrahana azy amin'ny Ubuntu. Ity lozisialy ity dia misy na tsy misy interface graphique, izany hoe miaraka amina kinova ho an'ny Desktop (GUI) ary iray hafa ho an'ny Terminal (CLI).
Raha vantany vao navotsotra ny kinova iray na roa, dia azo apetraka ny dika mitovy mitovy amin'ny mpitantana fonosana sary na console ny safidinao sy ny fomba fanao mahazatra anao. Ho an'ny Tutorial-nay, hampiasa ilay baiko izahay «dpkg». Ary toy izao manaraka izao ho an'ny fonosana GUI:
Hatramin'ny, efa mampiasa ny GNU / Linux Distro Fahagagana 2.0, ny baiko «dpkg» mitatitra ny tsy fisian'ny fiankinan-doha na tranomboky manaraka: «libqt5websockets5». Izay, azontsika napetraka teo aloha mba tsy hahita ny tenantsika ao anaty hadisoana voalaza, raha mampiasa an'io Distro io isika. Raha mampiasa Ubuntu, Debian, MX Linux na hafa mitovy na tsia, tadidio ny manatsara ny OS-nao, araka ny natoronay an'ity lahatsoratra teo aloha, izay havaozinay hatrany.
Misy lesoka hafa tsy ampoizina, ho an'ny fiankinan-doha na tranomboky, azo vahana amin'ny fanoratana ny iray amin'ireo baiko 2 ireo, na ny mitovy aminy arak'ireo GNU / Linux Distro ampiasaina:
Raha toa ka nahavita tamim-pahombiazana ny fametrahana dia mijanona fotsiny izy hanombohana ny fampiharana, izay tokony hisy hitsin-dàlana antsoina hoe MinerGate ao amin'ny Lisitry ny rindranasa, Fizarana birao. Ary raha tsy misy ny olana, ny sasany tsy fantatra na tsy hita, dia tokony hisokatra tanteraka izy io, hidiranao amin'ny elektronika namany Sary amin'ny interface graphique an'ny programa ary midira. Aza hadino fa mila misoratra anarana voalohany ao amin'ny Sehatra MinerGate mba hampiasaina amin'ny fomba mahomby Software.
Imbetsaka ireo Rindrambaiko nomerika momba ny harena ankibon'ny tany mitaky fonosana sy tranomboky horonantsary (NVidia, AMD ary Intel) miasa tsara. Raha toa ka MinerGate, ny kinova fijanonanao «MinerGate-xFast-cli-1.7-ubuntu.deb», mitaky ny fametrahana ny «nvidia-cuda-dev», izay mitaky arakaraka ny GNU / Linux Distro efa nampiasaina, mba hisintomana andiana fonosana izay mety milanja manodidina 600 MB
Amin'ny tranga maro, ity hetsika ity izy io dia afaka manao ny rafitra tsy milamina raha tsy voalamina tsara izy ireo, na tsy manana ny fitaovana mety, na ny ratsy kokoa aza, azonao atao ny mangataka ny hamafa ny hafa fonosana tena ilaina ary avelao ny GNU / Linux Distro sahirana na tsy azo ampiasaina. Koa mitandrema, amin'ity tranga manokana ity.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hifidy iray hafa isika Rindrambaiko nomerika momba ny harena ankibon'ny tany handeha hitsapana maro, tsikelikely.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny Rindrambaiko nomerika momba ny harena ankibon'ny tany antsoina hoe «MinerGate», izay iray amin'ireo ampiasaina indrindra amin'ny fahatsorany, ny fahombiazany ary ny laza eken'ny Crypto Platform izay mamatsy azy; be be fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » MinerGate: Ahoana ny fametrahana an'ity rindrambaiko mpitrandraka amin'ny GNU / Linux ity?
Hivadika ho Vi ho an'i Nano ny Fedora 33 ary resahina ny fanohanana ny BIOS
Mandrel: distro GraalVM hananganana Quarkus